बेलायती पैसाको बिटो भिडियोमा देखाउँदा गृहमन्त्रीसँग जोडिएकी शाह मनी लाउन्ड्रिङमा फसिन्
गृहपृष्ठ » अपराध » बेलायती पैसाको बिटो भिडियोमा देखाउँदा गृहमन्त्रीसँग जोडिएकी शाह मनी लाउन्ड्रिङमा फसिन्
काठमाडौं । गृहमन्त्रीसँग नाम जोडिएकी एक युवती भिडियोका कारण विवादमा परेकी छिन् । पाकिस्तानका गृहमन्त्री शेख राशिदसँग नाम जोडिएकी एक महिला विवादमा परेकी हुन् ।
पाकिस्तानको ‘ड्रामा क्वीन’ फेरि चर्चामा छन् । उनको एउटा भिडियोले पाकिस्तानको राजनीतिमा हंगामा मच्चाइरहेको छ ।
एक भिडियोमा कमेडल हरिम शाहले पाउण्डको बन्डल लिएर इमरान खानको सरकारलाई निशाना बनाएकी हुन् । सामाजिक सञ्जाल स्न्याक भिडियोमा शेयर गरिएको भिडियोमा हरिम शाह दुई बन्डल ब्रिटिश पाउण्ड लिएर बसेको देख्न सकिन्छ ।
नोटको बन्डल देखाउँदै आफू पाकिस्तानबाट यति ठूलो रकम लिएर पहिलोपटक लण्डन पुगेको बताइन् । तर, पछि कारबाही हुने डरले रमाइलोका लागि उक्त भिडियो बनाएको बताइन् ।
पाकिस्तानी मुद्राको हालै भएको अवमूल्यनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै हरिम शाहले पाकिस्तानी रुपैयाँलाई युरो वा डलरमा परिणत गर्दा धेरै दुःख हुने बताएकी छिन् ।
उनले भिडियोमा भनेकी छिन्, ‘सरकारले मुद्राको मूल्य र पाकिस्तानी राहदानीको महत्त्व बढाउने वाचा गरेको थियो, तर केही गरेन । उनीहरूले मात्र कुरा गर्न सक्छन् । ठूलो रकम लिएर यात्रा गर्नेहरु सचेत हुनुपर्छ ।
म यहाँ (बेलायत) धेरै सजिलै आइपुगेँ । पाकिस्तानको कानून गरिबलाई मात्र लागू हुन्छ ।’ पाकिस्तानी अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’का अनुसार अहिले पाकिस्तानको अनुसन्धान एजेन्सी एफआईएले टिकटक स्टार हरीश शाहविरुद्ध मनी लन्ड्रिङको लागि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
हरिम शाहले आफूले ठूलो मात्रामा नगद लिएर पाकिस्तानबाट बेलायत गएको दाबी गरेपछि सरकार एक्शनमा आएको हो । पाकिस्तानको संघीय राजस्व बोर्डका अनुसार कुनै पनि यात्रुले पाकिस्तानमा जतिसुकै विदेशी मुद्रा ल्याउन सक्छन् तर अनुमतिविना १० हजार डलर मात्रै विदेशी मुद्रा निकाल्न सक्छन् ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि पाकिस्तानी अनुसन्धान एजेन्सीले हरिम शाहविरुद्ध मनी लन्ड्रिङको अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । संघीय अनुसन्धान एजेन्सीले यस प्रकरणमा हरिम शाहको भिसा, अध्यागमन र यात्रा कागजात प्राप्त गरेको छ ।
अनुसन्धान एजेन्सीले पाकिस्तान भन्सार र विमानस्थल सेक्युरिटी फोर्ससँग पनि विवरण मागेको छ । हरिम शाह गत जनवरी १० मा कराँची अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दोहा गएकी थिइन् ।
एफआईएले हरिम शाहविरुद्ध कारबाही गर्न बेलायती अनुसन्धान एजेन्सीलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ । हरिम शाहले एक टिभी कार्यक्रममा पाकिस्तानी गृहमन्त्री शेख राशिदलाई फोन गरेकी थिइन् ।
टिकटक स्टारले यो घटनाको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन् । तबिश हाशमीको शोमा कुराकानीको क्रममा जब शेख राशिदको चर्चा भयो, हरिम शाहले तुरुन्तै पाकिस्तानका गृहमन्त्रीलाई फोन गरेकी थिइन् ।
८ वर्ष अघि बलात्कारको सिकार भएको खुलासा गर्ने किशोरीद्धारा प्रहरी भेट्न अस्वीकार
बलात्कृतले मिस नेपालसँग सहयोग माग्दा त्यो तिम्रो समस्या हो, मलाई फोन नगर भन्नु कति अन्याय ?
बलात्कृत सुस्मिताका पीडकलाई अविलम्ब गिरफ्तार गर, न्याय मरेको छैन भन्ने प्रमाणित गर
सतीत्व रक्षाका निम्ति प्रतिकार गर्दा बलात्कारीको मृत्यु भएमा ज्यानमाराको बात लाग्दैन
बलात्कारमा परेँ भनेर फोन गर्ने किशोरीलाई सहयोग नगरेकी माल्भिकाले माफी मागिन्
सुन्दरी प्रतियोगिता जिताउने नाममा किशोरीलाई ६ महिनासम्म बेहोस गराएर बलात्कार
जंगलमा आगो लगाएर टिकटक बनाएपछि मुद्धा, आजीवन कारावास हुनसक्ने
विवाह वर्षगाँठमा यौनसम्बन्ध राखेपछि महिलाको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ
एक सांसदको अश्लील भिडियो लिक [ भिडियोसहित ]
वसुन्धरामा मसाज (स्पा) सेन्टरभित्र यौन धन्दा चलाउनेहरु पक्राउ
हरेकको मनमा बसेका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. सोमनाथको शव फेला : हत्या की आत्महत्या ?
बलात्कार अभियोगमा निलम्बित सांसद बानियाँका छोरा पेस्तोलसहित पक्राउ
बलात्कार मुद्धामा सिद्धबाबालाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टायो